xukuumadda maxaakala gudboon heshiiska DP WORLD ee Berbera, maxaase khatar ku ah heshiiska : By Xuseen Xasan Xuseen(Xusen-Mahdi). | Wadamagoo News
Genel Energy, oo ahayd shirkaddii shiidaalka goballada bariga ka baadhaysay, waxa ay u qaxday ee meesha ay uga baxday waa gacmaheenna, burburin ka timid shicib iyo dowlad ba. Ayaan-darro weyn bay ahayd in la maarayn kari waayey, ceeb qaran ayey ahayd in shirkad shaqo bilowday, qalab badan la timid xabad lagu saaro. Farsamo xumo, wacyi-galin la’aan, xisaab celin la’aan ayey ku timid, kuma dhacdo in shirkaddaasi dib u timaad, oo wali waa ay taal khatartaasi.
Si looga taxaddiro carqalad ay bulshada gobalku ku keento shirkadda, waa in wacyi-galin lagu sameeya, iyada oo gobal ahaan iyo qaran ahaanba faa’idada uu heshiiskani u leeyahay looga warramayo.
Sumcad xumada qaranka soo gaadha, mid wal oo Somaliland ku nool waa soo gaadhaysaa, in wax wal oo horumar ah, dan u ah qaranka reer looga habrado waa ceeb dowladeed, dowladnimada si caqli ah waa in looga shaqeysiiyaa